Ny YiXing Global Logistics dia nametraka fifandraisana fiaraha-miasa maharitra sy sariaka amin'ireo seranam-piaramanidina amerikana maro toa ny UPS, DHL, Federal, United Airlines, sns.
Fanaronana fonosana, fonosana, fivarotana entana, fahazoan-dàlana amin'ny fadin-tseranana, famandrihana, fandefasana, fiantohana ary serivisy fiatoana hafa.
Fandefasana rivotra mankany amin'ny fizotran'ny asa any Etazonia
Tombony amin'ny serivisy fandefasana rivotra
- Tombony amin'ny fiarovana: ny fizotran'ny fanarahan-dia, olona manolo-tena tompon'andraikitra amin'ny fiantohana ny fandefasana entana azo antoka sy mahomby; Very ny entana, simba ny entana dia manao fitakiana haingana.
- Tombony amin'ny vidiny: Express efatra iraisampirenena, zotram-piaramanidina iraisam-pirenena maromaro fiaraha-miasa mivantana, tsy misy rohy mpanelanelana, vidiny madio sy mangarahara.
- Tombony ara-potoana: fahaizan'ny fahazoan-dàlana amin'ny fadin-tseranana, mpiasan'ny firenena maro any ivelany; Fahaizan'ny fahazoan-dàlana hatramin'ny 99%; Alamino mialoha ny fiara fitaterana.
- Tombony amin'ny serivisy: serivisy ajanona. Ataovy miavaka ny drafitry ny lozisialy sy ny fitaterana; Omeo entana feno arakaraka ny serivisy; Ekipa matihanina miatrika olana ara-potoana.
Fanamarihana ho an'ny fitaterana an'habakabaka any Etazonia: takiana ireo antontan-taratasy rehefa entina amin'ny rivotra ny lamba / fitafiana any Etazonia.
1. faktiora amin'ny zotram-pitaterana an'habakabaka, lisitry ny entana, lisitry ny fidirana amin'ny fadin-tseranana (endrika 7533) na ny hafainganan'ny fidirana (endrika 3461). Lisitry ny entam-barotra ampiasaina hamaritana ny lanjan'ireo entana ireo.
2. Tokony ho fantatry ny fadin-tseranana ny anaran'ny mpandefa entana, ary ny mpanafika dia tokony hanaporofo amin'ny ladoany fa nanafarana ny entana, noho izany dia tokony hisy ny «taratasy fanamarinana ny fitaterana».
3. Lisitry ny fonosana. Raha ilaina dia azo apetraka koa ny antontan-taratasy ilaina hafa mba hahazoana antoka fa milamina ny fidiran'ny entana. Rehefa avy nameno ny takelaka fidirana dia nanambara ny haavon'ny tarif ny mpanafatra ary mandoa ny vidin'ny tarif sy ny fikarakarana. Amin'ny tranga sasany, mety misy adidy fanampiny, izay mitaky fametrahana.